IPacechestown Racecourse & Indawo Indawo - IntoKildare
Abantu Benza iPunchestown
Yiba ngaphezu kwesibukeli - Yiba yingxenye Yaso
Abantu benza iPunchestown futhi sibheke phambili ekwamukeleni kule ndawo yezemidlalo ebabazekayo, enqoba imiklomelo egxile emlandweni. Idume ngokwamukela okuhle nobungani bayo obuhle, iPunchestown inikela ngemidlalo eyingqayizivele nethembekile yezemidlalo yase-Ireland lapho ungahlangana khona nama-racing greats ngenkathi udala izinkumbulo ngosuku nabalingiswa abakhulu bemboni.
Okumbalwa okuhlangenwe nakho kwezemidlalo okuqhathaniswa namandla aluhlaza nobuqiniso bemijaho yamahhashi. E-Ireland, umjaho wamahhashi kulapho umdlalo namasiko kuhlangana khona. Kuyinto engokwemvelo emasikweni nasegugu lase-Ireland. Iyashesha, inzima, inokuncintisana okukhulu kodwa iyajabulisa, iyajabulisa futhi inothando ngokulingana. Isikhathi somjaho wasePunchestown siqala ngo-Okthoba kuya kuJuni unyaka ngamunye ngemidlalo engama-20 isiyonke.
Izinsuku ezinhlanu njalo ngenyanga ka-Ephreli i-Punchestown ibamba isiphetho esihle kanye nokugqanyiswa kwesizini kulo mdlalo. Imali enkulu yomklomelo, amahhashi amahle kakhulu ase-Ireland naseBrithani, abaqeqeshi nama-jockeys ancintisana ukusungula ompetha namaqhawe. Lokhu kuhlanganiswe nokudla okumangazayo, izitolo, ukuzijabulisa kanye nomoya kudonsela isixuku sabangaphezu kuka-125,000.
Itholakala kalula endaweni engamahektare angama-450 enhliziyweni enhle yesifunda iKildare emagqumeni ezintaba zaseDublin Wicklow futhi kungakapheli ihora elilodwa esikhumulweni sezindiza saseDublin nasenkabeni yedolobha, inkundla yomjaho uqobo ibhekwa njengenye yezishumi eziphezulu emhlabeni.
Ngenxa yobukhulu besiza nengqalasizinda kuhlangene nezinhlobonhlobo zezindawo nezindawo, iPunchestown ithathwa njengenye yekhonsathi, imicimbi kanye nezindawo zokubonisa ezisezingeni eliphakeme kunazo zonke e-Ireland. Ithimba lasePunchestown linolwazi oluningi nolwazi embonini yemicimbi ehlanganiswe namakhono ahlukahlukene azosiza noma yimuphi umgqugquzeli womcimbi ekwenzeni umcimbi ophumelele.
Ukukhethwa kwezindawo zokudlela, amadokodo, imigoqo namasudi azimele kuqinisekisa ukuthi wena nezivakashi zakho nizophumula futhi nithokozele umdlalo omnandi wase-Ireland ngokudla okumnandi neziphuzo endaweni enethezekile.
Ukuzidela Nemisebenzi, Outdoors, I-Equestrian Kildare, Naas
Naas, Isifunda iKildare, Ireland.